Suuqa caalamiga ah ee caqliga leh ayaa koraya ilaa $ 137.9 bilyan 5 -ta sano ee soo socota
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Suuqa caalamiga ah ee caqliga leh ayaa koraya ilaa $ 137.9 bilyan 5 -ta sano ee soo socota
Cilmi-baarista Suuqa Siyoon waxay daabacday warbixin cilmi-baaris cusub oo cinwaankeedu yahay “Suuqa Guriga Smart- By Product (Jikada Caqliga leh, Amniga & Xakamaynta Helitaanka, Xakamaynta Iftiinka, Daryeelka Caafimaadka Guriga, Xakamaynta HVAC, Iyo Kuwa kale): Aragtida Warshadaha Caalamka, Falanqaynta Ballaadhan Iyo Saadaasha, 2020- 2026 ”. Sida lagu sheegay warbixinta, cabirka suuqa caqliga leh ee guriga ayaa la filayaa inuu gaaro $ 137.9 bilyan marka la gaaro 2026 laga bilaabo $ 85.6 bilyan sanadka 2021, oo ah CAGR oo ah 10.4% inta lagu jiro xilliga saadaasha.
Cilmi-baarista Suuqa Siyoon waxay daabacday warbixin cilmi-baaris cusub oo cinwaankeedu yahay “Suuqa Guriga Smart- By Product (Jikada Caqliga leh, Amniga & Xakamaynta Helitaanka, Xakamaynta Iftiinka, Daryeelka Caafimaadka Guriga, Xakamaynta HVAC, Iyo Kuwa kale): Aragtida Warshadaha Caalamka, Falanqaynta Ballaadhan Iyo Saadaasha, 2020- 2026 ”. Sida lagu sheegay warbixinta, the suuqa caqliga badan cabirka ayaa la filayaa inuu gaaro $ 137.9 bilyan marka la gaaro 2026 laga bilaabo $ 85.6 bilyan sanadka 2021, CAGR oo ah 10.4% inta lagu jiro xilliga saadaasha.
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha Sion Market Research, kobaca ugu weyn ee kobcinta suuqa guryaha caqliga leh wuxuu ka kooban yahay wacyigelin sii kordheysa oo ka dhexaysa isticmaaleyaasha ku saabsan isticmaalka tamarta, kor u kaca dakhliga la tuuro ee waddammada soo koraya, kordhinta dadka da'da ah, iyo barnaamijyada dowladda iyo kuwa kale. Marka laga reebo tan, baahida sii kordheysa ee daryeelka caafimaadka guriga ayaa xoojineysa horumarinta suuqa caqliga leh ee guriga. Dhinaca kale, wareegyada beddelka aaladda dheer iyo kharashyada sarreeya ee la jaray baahida isticmaaleyaasha xaddidan ayaa ah caqabadaha ugu sarreeya ee xakameynaya suuqa guriga caqliga leh oo laga beddelo marxaladda korsashada ballaaran laga bilaabo marxaladda hore ee korsashada.
Si kastaba ha noqotee, soosaarista alaabada cusub ee ay soo bandhigaan ciyaartooyda suuqa ayaa sii kordhineysa xafiiltanka taas oo sare u qaadeysa horumarinta suuqa guriga caqliga leh. Tusaale ahaan, bishii Agoosto 2018, Philips Hue wuxuu ku dhawaaqay tiro nalal casri ah oo cusub oo horseedaya horumarinta suuqa guriga caqliga badan ee adduunka.
Qeybinta suuqa guryaha caqliga leh waxaa lagu fuliyaa iyadoo ku saleysan gobolka iyo badeecada. Qeybaha wax soo saarka ee suuqa guriga caqliga leh waa daryeelka caafimaadka guriga, jikada caqliga leh, xakamaynta HVAC, xakamaynta iftiinka, iyo kuwa kale. Kontoroolka iftiinka ayaa qabsaday saamiga ugu weyn ee suuqa guryaha caqliga leh iyada oo ay ugu wacan tahay isticmaalka korontada ee guryaha. Dareemayaasha iftiiminta ayaa xakameynaya xoogga iftiinka macmalka ah sida ku cad xoogga iftiinka dabiiciga ah, sidaa darteed hoos u dhigista adeegsiga awoodda iyo kor u qaadista suuqa guriga caqliga leh.
Waqooyiga Ameerika waxay qabsatay saamiga ugu weyn ee suuqa guryaha caqliga leh taas oo ay ugu wacan tahay kororka dadka iyo kor u kaca baahida daryeelka caafimaadka guriga. Yurub waa mid kale oo hormuud u ah suuqa guryaha caqliga leh maadaama ay eryanayso Waqooyiga Ameerika. Hindisaha dawladda ee Waqooyiga Ameerika waxay ka kooban tahay meel fog laga maamulo mitirka korontada, gaaska, iyo biyaha si sahlan loogu tago shabakadda caqliga badan. Tamarta & keydinta qiimaha, dadka da'da ah, ku -habboonaanta, amniga, dadaallada dowladda, iyo yareynta qiiqa kaarboonka ayaa ah dhiirrigeliyeyaasha ugu waaweyn ee horseedaya horumarinta suuqa guryaha caqliga leh sannadaha soo socda. Aasiya Baasifigga ayaa sidoo kale loo qorsheeyay inay muujiso horumar la taaban karo suuqa caqliga leh sannadaha soo socda.
Shirkadaha caanka ah ee suuqa guryaha smart ayaa ah Siemens AG, Legrand, Ingersoll-Rand plc, Johnson Controls Inc., Acuity Brands, Inc., Schneider Electric SE, United Technologies Corporation, ABB Ltd., Nest Labs, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Crestron Electronics, iyo Honeywell International Inc. Ciyaartoydan ayaa loo sheegaa inay kor u qaadayaan suuqa guryaha caqliga leh ee adduunka.